トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Iinkcukacha eziqokelelwe ukudala uthungelwano nakunxibelelwano kubathengi, Pachipuro ngo nesendlu pa
Ndicinga ukuba kukho abathengi abakubonayo lonke ixesha usiya elibe fans. Ngabathengi ziyolala yonke Shigeku unyawo imihla ngaphezu msebenzi, obizwa ngokuba kubathengi kushishino pa. Kwaye, nangona ndicinga ziphawulwe amathuba kunye lula ukuluqonda, abanye abantu ebizwa Pachipuro udlele kuloo pa.
pa parlour, Abathengi babegqalwa ngesiseko Pachipuro, ngokufuthi uyakwazi ivalwe njani, kodwa kunzima ukuxelela. Xa ezinjalo Pachipuro okanye ukuba ngaba kuhle ukwenza uqhagamshelwano buqu kunye ivame, kodwa umntu oya kuba wokwazi kangangoko unako ukuthetha, ndicinga ukuba kuyinto Yebo kuluncedo.
ivame ziquka, kodwa hayi kwakhona ixhomekeke iziganeko sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe nalo, oko kuya pa parlour enye yonke imihla. Pa yeyona ndiyithandayo, Kakade, kodwa ivame ubukhulu becala abo bathanda ukuthenga ngokwayo.
umbuzo wokuba ingaba umntu ukuqonda, kodwa kuya kwenzeka kwelinye ibali, kuba inguqulelo ukuya pa parlour enye yonke imihla, siyazi ukuma omhle intshukumo nazo kakhulu. Umzekelo, ukuba qonga, Toka ebuyayo amaxesha amaninzi izolo, siye utyalo-mali enkulu, intetho ezifana ndeza kwakhona Emva out kakhulu izihlandlo ezininzi, ngaba wena okanye uve iintlobo kwi ingxoxo.
Ngu ingcamango ukwenza unxibelelwano zobuqu kunye ivame, ukusuka data, uya kuba iinkcukacha ezifana ayifunde lula, kunokwenzeka ukuba lula. Ngokuqhelekileyo, okanye kukho emsebenzini, ndicinga ukuba kukho naxa kunzima ukuya elibe fans yonke imihla. ulwazi
evela ivame, kodwa kwakhona wambi izinto ezifana ezilungileyo nakanjani, ngoko ke wena okanye mna ukuchaza abo bazijongisise ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, nceda ubone ndithethe. Kukho ke inkoliso iinzuzo ukuba ukufumana kunye ivame.
nguye unxulumano lobuqu
ngoko Pachipuro, kodwa ndicinga oku kukuba kunzima kakhulu olusengqiqweni. Noko ke, ukuba ndithe ndakwazi ukwenza unxibelelwano kunye naliphi na ithuba Pachipuro, ndicinga ukuba akukho mathandabuzo ukuba idolo ulwazi umthombo ukuya ngaphezu ivame.
_x 000D_ Pachipuro, ngenxa yokuba baziphilisa kwi pa, iye isifundo eninzi. Ngalinye specs kunye nokusebenza okanye, umgca umda, ezifana ukumisa okanye xa kuhlasela, ekucingelwa ukuba ezahlukeneyo ulwazi modeli ngalinye nini.
Nangona kunjalo, kwimeko Pachipuro, ngokungafaniyo rhoqo, linjani kwizangqa esimnandi pa parlour bekhangela kweWCED. akuthethi apho yonke imihla, nesendlu fans enye, abo musa ukuya kuphela pa ivenkile efanayo kodwa ke, nabo abo baya nesendlu ezahlukeneyo fans, nazo nazo kananjalo kufuneka wayezimisele ukuba
Pachipuro, ndicinga ukuba kunzima . Eyona intle kukuthi, Andimazi Pachipuro, ngayo ukuba sibe ngabahlobo nabantu abasoloko kakuhle ngaphandle. Xa ndizama ukuthetha, ukuba wena okanye Kuwashika 'apha kumatshini inkcazelo, kukho ithuba lokuba afumane ukunika inkcazelo esebenzayo.